Happy Birthday Ma Naw Phyu Lay | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » Happy Birthday Ma Naw Phyu Lay
Posted by lynn lynn on Jul 18, 2012 in Entertainment | 35 comments
စာလည်း အရေးအသားကောင်း အရမ်းလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မနောရဲ့ 20.7.2012 မှာ ကျရောက်မယ့် မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
စာတွေအများကြီးဖတ်တဲ့ အမအတွက် စာအုပ်တွေ ထားဖို့ စာအုပ်စင်လေး လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
…မနောဖြူ၄ ရဲ့မွေးနေ့မှသည်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ….
ဖြစ်သလဲဆိုတာလည်း ပြောဦးလေဂျာ ..
မနောဖြူလေးက အပျိုကြီးတဲ့ ..
အပြင်မှာတွေ့တော့ ကျုပ်နဲ့ နင်လားငါလားပဲ .. အဟီးးးးး
ကြိုပြီးတော့ Happy Birthday လုပ်လိုက်ပါတယ် မနောဖြူလေးရေ ..
အပျိုကြီး ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို (ဘိန်းစားချင်းတူတူ တမူးပိုရှူတဲ့ အပေါ်က လူဗျိုဿိုး ခြောက်မျက်နှာအူးလေးကြီးတို့လို) ဟိုလူဒီလူ မျက်စောင်းထိုး ခလုတ်တိုက် စနောက်ခံရတဲ့ဘေးမှ အမြန်ဆုံး လွတ်ကင်းပါစေဗျ..
(ချောင်းဟန့်သံ ဖြစ်၏ … )
ညီမငယ်လေး မနော (အကိုကြီး အသံဖြင့် ပြောသည် )…မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး စာပေအကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေကြောင်း….။ Birthday Card တော့ မေးလ် ထဲကို ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ မွေးနေ့မှာ မုန့်ကျွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်မှာ တကယ်ဝယ်ကျွေး။
မမ ပိစိ မွေးနေ့မှာ
အောင်မြင်မှုတွေ ပိုပို တိုးလို့ ရပါစေ
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ။
ယနေ့မှစ၍ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အောင်မြင်မှု ပျော်ရွှင်မှုများ ရရှိခံစားနိုင်ပါစေ………….. [:)]
တော်သေးရဲ့ .. မနက်ဖြန်မှ မွေးနေ့မို့လို့ ..
ှဆရာမကြီး ပိုစ် ထဲကလိုဘဲ မနေ့က နောက်မှ wish လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထားလိုက်မိတာ. အခုမှ သတိရပြီး နောက်ကျသွားပြီထင်တာ … :grin:
ကြိုပြီးတော့ဘဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် … Happy Birthday ပါ မနောရေ..
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ မြန်မြန်ပြည့်ပါစေလို့… ဟီး… ထီပေါက်မှာကိုပြောတာပါနော်…
Happy Birthday ပါ မနောရေ
ဂျီးတော်မနော၏ အသက်လေးဆယ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် အသက်ကိုးဆယ် တရာထိတိုင်သို့ ပျော်ရွှင်မှုများစွာဖြင့်….
ဆုမွန်ကောင်းခြွေလျက် ၂ဝနှစ်သား တက်ကြွသော ကြက်ဖလေး အောင်ကြူး….။
ပျော်ရွင်စရာ မွေးနေ့တွေကိုနှစ်၁၀ဝကျော် ဆင်နွဲနိုုင်ပါစေ
အပျော်ရွှင်ဆုံး မွေးနေ ့ပေါင်းများစွာမှသည် အသက် ၁၂ဝ တိုင်အောင် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
ဇူလိုင် ၂ဝ မှာကျရောက်တဲ့ မမ မနောရဲ့ (*) နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည် နောက်ထပ် နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ ဆန္ဒနဲ့ဘဝ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေနော်
Happy Birthday! Single Woman …
“မမနော်”ရေ Happy Birthday ပါနော်……
ဒီနှစ်မှကျရောက်သော မွေးနေ ့မှစ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိတိုင်အောင်
ချစ်မမ ၂ဝရက်နေ့ကျရောက်မယ့်မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မမချစ်သောစာပေ မမချစ်သောမိသားစု မမချစ်သော မမရဲ့ကြင်ယာဖက် မမချစ်သောမမတပည့်များနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာကိုယ့်ကျန်းမာစွာနဲ့ စာများလည်းဒီထက်ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာပေများဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ မမလိုချင်သမျှအရာမှန်သမျှလည်းလိုတိုင်းတ တတိုင်းရပါစေမမမနောရေ။။
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ မှ သည် စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နဲ့ ပြည့်ဝ ပါစေ မနော ဖြူလေး ရေ။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မနောရေ။
မွေးနေ ့အခါသမတွင် ပျော်ရွှင်သာယာ ချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း
— ဘေးရန်၊ကြောင့်ကြ ၊ ဆင်းရဲခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးပါစေ ..
— လုပ်ငန်းကိစ္စများအောင်မြင်၍ ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ…
— အသိဉာဏ် ကြီးမား၍ လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝနိုင်ပါစေဗျာ….။
မမနော ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်သွားရ အောင် အကြံ ပေးရမယ် ဆိုရင် မုန့်စားချင်တဲ့ သူတွေကို မွေးနေ့ ကိတ်တွေ ဘာတွေ ကျွေးတာထက် ငပိ တစ်ပိသာ ဝယ်ပီး ဝိုင်းဝိုင်းလေးလုပ် မီးဖုတ် – ပီးရင် အဲဒီ အပေါ်မှာ ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်း – လူစုံတာနဲ့ ဖယောင်းတိုင် မီးမှုတ် ဒါးလေးနဲ့ လှီးပီး ကျွေးလိုက် – ဟဲဟဲ – နောက်တာနော် – ဒီနေ့ မှသည် ဘဝ တလျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်ရယ်မော စွာ ဖြတ်သန်းပီး အကျိုးပြု စာပေများ လည်း များများ ရေးနိုင်ပါစေ ။ အမြဲတမ်း ဖတ်ရှူ အားပေး နေပါတယ်။
ယနေ့ရောက်ရှိသော မနောဖြူလေး မွေးနေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုးတက်ပြည့်စုံချမ်းသာခြင်းနှင့်အတူ ကျန်းမာရွှင်လန်းမှု့နှင့် အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေလို့ ဆုမွန်ပြုပါတယ်။
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့လေးကို မင်္ဂလာရှိစွာကုန်ဆုံးနိုင်ပါစေ အစ်မ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အစ်မမနောရေ .
မွေးနေ့ ရက်လေးမှသည် ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကျတဲ့ နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော် ။
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေ
လိုတဲ့ ဆုတွေကိုလည်း မတောင်းပဲနဲ့ ရနိုင်ပါစေလို့
မင်္ဂလာ ရှိသောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ ကြောင်းပါ..မ မနောရေ..
အားလုံးခုလို သတိတရ မွေးနေ့လေး ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် မနော ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အားလုံးကိုလည်း အမြဲချစ်ခင်နေလျက်ပါလို့… တကယ်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်…. တင်ထားမှန်းမသိဘူး။ မနောကို သတိရတဲ့သူတွေရှိနေသေးပါလားလို့ သိရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်…… အားလုံးကို အမြဲခင်ပါရစေလို့ ဒီနေရာလေးကနေ ပြောပါရစေနော်။
မွေးနေ့မှစပြီး သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့
ဆုတောင်းပေးပါတယ် မမ မနောရေ
Happy Birthday ပါ မနောဖြူလေးရေ။ စာတွေဒီထက်ပိုပြီးရေးနိုင်ပါစေ။ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။